Shirkad shaqaale looga weeraray Somaliland oo hadashay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirkad shaqaale looga weeraray Somaliland oo hadashay
A warsame 14 August 2014
Mareeg.com: Shirkadda DNO ee laga leeyahay dalka Norway oo uu maamulka Somaliland la galay heshiis shidaal baaris ah, ayaa ka hadashay fal toddobaadkan lagu rasaaseeyay shaqaalaheeda oo hawlo shaqo u joogay degmada Xudun ee gobalka Sool.
Shirkadda ayaa meesha ka saartay iney Somaliland shaqaalaheeda kala baxayso, falkaas weerarka aha kadib.
Afhayeenka shirkadda DNO, Henrik Schwabe, ayaa wargeyska caanka ah ee Wall Street Journal, u sheegay inaanu wax dhaawac ahi soo gaarin shaqaalahooda. “Qiyaastii 3:30 PM (11 August) tiro kooban oo xabado ah ayaa lagu soo waramay in lagu riday kaamboolka kooxda,” ayuu yiri afhayeenku, waxaanu intaas raaciyay “Qofna kuma dhaawacmin, kooxdiina si deg deg ah ayaa Hargeysa loogu daad-gureeyey.”
Afhayeenku, wuxuu sheegay inay kooxda DNO degmada Xudun ee gobalka Sool, gaar ahaan Baloog 18 oo heshiis lagu siiyay, ka wadeen sahan biyo ah, oo ah mashruuc ay DNO ku doonayso inay dadka deegaanka ku siiso biyo nadiif ah. “Maamulka Somaliland ayaa baaritaanada dheeraadka ah samaynaya.” ayuu yiri Afhayeenku.
Wuxuu sheegay inuu ka war qabo in saxaafadda maxaliga ah qaarkood baahiyeen warar sheegaya in shirkadda DNO ka bixi doonto Somailand, waxase uu wararkaas ku tilmaamay kuwo aanay waxba ka jirin, taas oo ah inaanay shirkadu ka baxayn Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, ayaa isna sida uu wargeysku qoray sheegay inuu maqlay falka ka dhacay Xudun balse aanu faahfaahin ka haynin, waxaanu sheegay inay Somaliland dhawaan samaynayso ciidanka ilaalinta khayraadka oo loo yaqaan OPU (Oil protection unit).
“Degdeg waxaanu u rajaynaynaa inaanu yeelano ciidanka OPU.” ayuu yiri wasiirku, waxaanu intaas raaciyay in tirada ciidanku noqon doonaan 420 askari. Wuxuu wasiirku tilmaamay in marka ciidanka la sameeyo uu rajaynayo inaanay falal dambe dhici doonin.
Dhaawaan ayay aheyd markii malesshiyo beeleed careysan ay rasaasseeyeen shaqaale ka tirsan hay’adda DNO, inkastoo aan wax khasaare ah ka dhalan rabshadaas.
Daawo: Gabar Wariye ah oo geerida walaakeed lagu soo gaarsiiyey TV toos ah